စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်မှာ နားထောင်သင့်တဲ့ လူတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်နေတဲ့ BTS ရဲ့သီချင်းများ
BTS အဖွဲ့ကို ချစ်ဖို့ရာအကြောင်းပြချက်မျာစွာရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သီချင်းကွာလတီတွေ၊ လှပတဲ့ ကဟန်တွေ၊ ပြီးတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ အစရှိသဖြင့် သူတို့ကို ချစ်မိသွားဖိုရာလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း BTS ဟာ ယခုလို အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ရခြင်းဟာ အကြောင်းပြချက်တွေထဲက တစ်ခုကတောာ့ သူတို့က လူတွေကို ဟိုးအောက်ဆုံးက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဆင့်တွေအထိရောက်အောင်ကို သူတို့သီချင်း တွေထဲကမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ထားတာပါပဲ။ အိမ်မက်တွေရဲ့နောက်ကို လိုက်ဖို့၊ စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်တွေကို စိန်ခေါ်ပြီး ပြီးတော့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်းပဲနေဖို့ အစရှိသဖြင့် သူတို့သီချင်းတွေကဆိုပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း အနှိမ်ခံ၊ အလှောင်ခံခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကနေ အိမ်မက်တွေနောက်ကို ဇွဲမလျှော့စတမ်းလျှောက်လာတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်သူတွေကို လည်း သူတို့အတိုင်း အိမ်မက်တွေနောက်လိုက်ဖို့ သီချင်းတွေကမှတစ်ဆင့် Inspire လုပ်နိုင်ခဲ့တာ တော်ရုံအရည်အချင်းနဲ့တော့မရဘူး။ ဒါကြောင့် မင်းရဲ့ဘ၀အခြေအနေက ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်နေပါစေ မင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ အိမ်မက်တွေထဲမှာရှင်သန်ကြပါ။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ သင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတက်ကြွစေဖို့ BTS ရဲ့သီချင်းကောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မိုမိုလေးနဲ့တူတူလိုက်ပါစီးမြောကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်။
ကျွန်တော့် အသက် (၉)နှစ် (၁၀)နှစ်မှာ ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံတွေရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်။
မင်းရဲ့လက်တွေကိုမြှောက်ပြီး ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ စေ့ဆော်တင်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် မင်းရဲ့ အိမ်မက်ကဘာလဲ
တကယ့်အစစ်အမှန်က ဘာလဲဆိုတာ မေးလိုက်စမ်းပါ။"
မင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို လွှင့်ပစ်လိုက်။"
BTS - no more dream myanmar sub
"လူကြီးတွေကပြောကြတယ် ဒီပင်ပန်းဆင်းရဲမှုက ခဏပါပဲ။
ခဏ်တော့ သည်းညည်းခံလိုက် နောက်မှပျော်ပေါ့..။
ဒီထက်တော့ သူများရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာပိတ်ပြီး အသက်မရှင်ကြနဲ့”
BTS - N.O (Myanmar Sub)
"မင်းတို့ ကလပ်တက်ပြီး ပျော်ပါးနေချိန်မှာ
ငါကတော့ နေ့တိုင်း ညလုံးပေါက် အလုပ်လုပ်နေခဲ့တယ်။"
BTS - Dope (Myanmar Subtitle)
"ကောင်းတဲ့အရာတွေကို ဘယ်တော့မဆို သူများတွေသာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့
မသေချာမရေရာတဲ့ အနာဂတ်ကို တွေးပူပြီး အမြဲမနားနိုင်ခဲ့လို့
နှစ်ကုန်ဆုပေးပွဲတွေမှာ စီနီယာကြီးတွေကို မြင်ယောင်ပြီး အားကျသိမ်ငယ်ခဲ့ရတဲ့ မှတ်ဥာဏ်တွေကို
BTS Move On Sub Myanmar
အတောင်ပံတွေထွက်လာဖို့အတွက် ငါ့ကျောပြင်တွေ အနာခံပေးမယ်။"
" မင်း မပျံသန်းနိုင်ခဲ့ရင် ပြေးလိုက်စမ်းပါ။
ငါတို့ ဒီနေ့တော့ ရှင်သန်ရမယ်။
[Myanmar Sub]BTS 'Not Today MV
သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ မင်း ထိပ်ဆုံးရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဘေဘီ။"
Fun Boys (Boyz with Fun) Myanmar Subtitled Video
BTS LOST [Myanmar Subject]
BTS Never Mind Sub Myanmar
18. BTS Young Forever
19. BTS - Young Forever
တစ်ချိန်က သူတို့ concert လာဖို့အတွက် flyer တွေဝေပြီး အလကားလာခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အာပေါက်မတတ်လူအများကို လိုက်ရှင်းပြခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာ အခုအချိန်မှာတော့ အနုပညာကြေးအမြင့်ဆုံး ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင်တွေဖြစ်နေပါပြီ။ နောက်ထပ်လည်း အောင်မြင်မှုတွေကျန်ရှိနေသေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးလိုက်ရအောင်လား။